अब पानीले चल्छ गाडी ! – Samatal Online
अब पानीले चल्छ गाडी !
बुटवल । पानीबाट गाडी चल्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्ला। तर, नेपालमा यो सम्भव भएको छ। यहाँका एक युवा इन्जिनियरले पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण तयार परेका छन्। जसलाई जुनसुकै गाडी तथा मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उर्जाविद् शेखर अर्यालले पनि नेपाली पानीलाई प्रयोग गरेर गाडी चलाउनु महत्वपूर्ण आविस्कार भएको बताए। शिशिरले बनाएको डिभाइसको बुटवलमा प्रदेश–५का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले उद्घाटन गरे। अन्नपुर्णबाट साभार